Fitsikerana ny AirTags noho ny tsy fisian'ny fepetra fanoherana ny fanorisorenana | Avy amin'ny mac aho
Fitsikerana ny AirTags noho ny tsy fisian'ny fepetra fanoherana ny fanorisorenana
Iray volana izahay no tsy teny an-tsena niaraka tamin'ny AirTags ary ny fitsikerana dia zaraina mitovy amin'ny fiderana. Ankoatra ny zava-misy fa fitaovana vaovao tanteraka an'i Apple izy io ary ny dikan-teny voalohany dia mazàna mitondra bibikely na olana hafa, ny tsikera dia azo avy amin'ny fampiasana ireo gadget ireo ho singa hanorisorenana olon-kafa. Hetsika fanoherana ny fampijaliana ataon'ny Apple toa tsy ampy izy ireo.
1 Ny AirTags dia toa nosedraina noho ny fiasa hafa ankoatry ny niniana
2 Andao hojerentsika ny fandehan'ny andrana sy ny fehin-kevitra momba ny fepetra fanoherana ny herisetra
3 Ny valintenin'i Apple dia tsy ela akory
Ny AirTags dia toa nosedraina noho ny fiasa hafa ankoatry ny niniana
Efa nilaza taminay tsy ela akory izahay fa ny hevitra fametrahana ireo fitaovana ireo tsy tsara ny fanarahana olona na ankizy. Mety hisy dikany ihany raha toa ka indraindray noho ny tsy fitandremana dia very ny biby fiompintsika na very hevitra ny zanatsika ary farany tsy afaka mahita azy ireo isika. Fa mbola ratsy kokoa aza ny fampiasana azy io amin'ny hevitra hoe afaka manara-maso olona iray, manaraka azy ireo na mahita izay alehany. Marina fa raha te-hanao izany dia tokony apetrakao amin'ny fomba very ny AirTag ary koa hamoaka feo ... sns. Tsy mora izany na natao ho amin'izany tanjona izany. na izany aza mandinika izany ny olona sasany Ary alohan'izay dia anontaniana ny olona raha ampy ny fepetra napetrak'i Apple manoloana ny fanorisorenana.
vao haingana namoaka lahatsoratra ny Washington Post izay voalaza fa tsy ampy ny fepetra raisin'ny orinasa. Andao hojerentsika izay ifotoran'izy ireo hanamafisana izany fanambarana izany.
Geoffrey Fowler an'ny Ny Washington Post, amin'ny tatitra iray manadihady ny fomba fampiasana AirTags fanorisorenana miafina, milaza fa tsy nahavita tsara ny asany i Apple. Na iza na iza afaka mampiasa ny iray amin'ireo fitaovana ireo mba hahafahany manaraka olona iray.
Andao hojerentsika ny fandehan'ny andrana sy ny fehin-kevitra momba ny fepetra fanoherana ny herisetra
Fowler dia nanao AirTag momba ny tenany ary niara-niasa tamina mpiara-miasa iray ho henjehina. Nofintininy fa ny AirTags dia "fomba fanorisorenana vaovao mora vidy sy mahomby."
Ny fepetra apetrak'i Apple dia misy fampandrenesana momba ny tsiambaratelo mba hampahafantaran'ireo mpampiasa iPhone fa misy AirTag tsy fantatra miara-dia amin'izy ireo ary mety ao amin'ny fananany, miaraka amin'ny fampandrenesana feo mahazatra rehefa nisaraka tamin'ny tompony nandritra ny telo andro ny AirTag. Nilaza i Fowler fa nandritra ny herinandro mahery ny fanarahan-dia dia nahazo fampandrenesana avy tamin'ny AirTag miafina sy ny iPhone izy. Rehefa afaka telo andro dia nitendry feo ny AirTag izay nampiasaina handraisana an'i Fowler saingy "15 segondra fotsiny ny feon-jiro", nahatratra 60 DB teo ho eo. Avy eo dia nangina nandritra ny ora maromaro izy. Naneno indray nandritra ny 15 segondra. Feo mora takona raha misy tsindry kely apetraka amin'ny tampon'ny AirTag.
Ny famantaranandro miisa telo andro mamerina izany aorian'ny fifandraisany amin'ny iPhone an'ny tompony, ka raha miaina miaraka amin'ny mpangalatra azy ilay olona, ​​dia mety tsy hovelomina mihitsy ilay feo. Nahazo fanairana matetika ihany koa i Fowler momba ny AirTag tsy fantatra mifindra miaraka aminy avy amin'ny iPhone-ny, saingy nanamarika fa tsy misy an'ireo mpampiasa Android ireo fanairana ireo. Notsipihany ihany koa fa tsy manome fanampiana ampy ny toerana misy ny AirTag i Apple satria ny feo ihany no ahafahana manaraka azy, endri-javatra iray izay matetika tsy mandeha.
Ny valintenin'i Apple dia tsy ela akory
Kaiann Drance, filoha lefitry ny marketing an'ny Apple an'ny iPhone, nilaza tamin'ny The Washington Post fa ny fepetra napetraka tao amin'ny AirTags dia "andiana mpamaky indostrialy sy mavitrika ». Nanazava izy fa ny fepetra fanoherana ny fanorisorenana amin'ny AirTags dia azo hamafisina amin'ny fotoana sy kinova vaovao. «Rafitra manan-tsaina io. Afaka manohy manatsara ny lojika sy ny fotoana ahafahantsika manatsara ny fonosana fiarovana. '
Nifidy tetiandro telo andro i Apple alohan'ny AirTag nanomboka nilalao feo satria ny orinasa «Te hahita fifandanjana eo amin'ny filaminana sy ny fahasosoran'ny mpampiasa aho ”. Drance dia nandà ny hilaza raha nanontany ireo manam-pahaizana momba ny fanorisorenana an-trano i Apple rehefa namorona ny AirTags, fa nilaza kosa i Apple fa "misokatra amin'ny fandrenesana ny setriny avy amin'ireo fikambanana ireo."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fitsikerana ny AirTags noho ny tsy fisian'ny fepetra fanoherana ny fanorisorenana
Apple TV + thriller 'Servant' voatendry ho an'ny 2021 TV Choice Awards
Misy menio miafina miseho ao amin'ny "toerana marina" an'ny AirTags